5 qof oo dhimatay, tiro kale oo ku dhaawacantay dagaal ka qarxay deegaanka Xaya, J. Hoose. – Radio Daljir
Xaya, Nov, 11 – Wararka laga helayo gobolka Jubbada Hoose ayaa ku waramaya in dagaal u dhexee ciidanka dawladda iyo kooxda Al-shabaab uu ka qarxay deegaanka Xaya oo ka tirsan Jubbada Hoose, waxaana wararku intaasi ku darayaan in dagaalkaasi ay ku dhinteen dad gaaraya illaa 5 qof, halka ay jiraan dhaawacyo ka badan tirada dhimashada oo soo kala gaaray dhinacyadaasi.
Warar hoose oo Radio Daljir ay ka helayso deegaanka dagaalku uu ka qarxay ayaa tilmaamaya inay jirto waxyeelo soo gaartay dad shacab ah oo halkaasi joogay. Waxaana lagu waramayaa in dagaalkaasi ay soo qaadeen markii hore ciidanka dawaldda oo garab ka helaya kuwa Raas-kambooniyiinta.
Saraakiil u hadashay ciidanka dawladda ayaa qirtay in dagaalkaasi ay uga geeryoodeen illaa 2 ka mida ciidankooda, halka dhaawacana ay ku sheegeen 1 askari.
Kooxda Al-shabaab oo had iyo goor ka jawaabta guulaha ay sheegtaan ciidanka dawladda ayaan ka hadlin dagaalkii maantay ka qarxay deegaanka Xaya, waxaana hadda dagan xaalada deegaanka dagaalku uu ka dhacay.